Ra'iisalwasaaraha oo ka hadlay Kismaayo - BBC Somali - Warar
Ra'iisalwasaaraha oo ka hadlay Kismaayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 26 Mey, 2013, 18:47 GMT 21:47 SGA
Ra'iisalwasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa ka hadlay xaalada Kismaayo iyadoo wali aan la xalin maamulka gobolada.
Raiisalwasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon.
Ra'iisalwasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon, oo wareysi gaar ah siiyay BBCda ayaa waxaa uu sheegay in maamulada looga dhawaaqay Kismaayo ay yihiin kuwa aan waafaqsaneyn dastuurka Soomaaliya isla markaana aney aqoonsan doonin xukuumadiisa.
Waxaa uu sheegay inay xukuumadda gacan ka siin doonto shacabka gobolka sidii ay u yeelan lahaayeen maamul loo wada dhan yahay, taas oo dowladda federaalka ay gar wadeen ka noqon doonto.
Wariyaha BBCda ee Muqdisho Maxamed Ibraahim Macalimuu oo wareystay Ra'iisalwasaaraha ayaa ugu horeyn weydiiyay xilligan waxa uu yahay mowqifka xukuumadda ee gobollada Jubooyinka.